Ogaden News Agency (ONA) – Sh Maxamed Baaruud oo ONA Uga Waramay Waxqabadkii UCSO.
Sh Maxamed Baaruud oo ONA Uga Waramay Waxqabadkii UCSO.
Posted by Dulmane	/ January 1, 2019
Gudoomiyaha Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia qaybta wadanka Ogadenia kusugan, Sheekh Maxamed Axmed Baaruud ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA.
Sheekh Baaruud ayaa ugu horaynba kawarbixiyay soogalitaankii Culimada ee wadanka Ogadenia isagoo sheegay in ay kasoo galeen Suufka oo ah xuduuda Koonfureed ee wadanka, Gobolka Doollo oo ah xuduuda Bari ee wadanka iyo magaalo xuduudeeda Wajaale.
Sheekha ayaa sheegay in ay kulankoodii ugu horeeyay kuqabsadeen magaalada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar, halkaas oo ay kukala howl qaybsadeen iyagoo ukala baxay Gobolada Doollo, Qoraxay, Shabeelle, Afdhaar iyo Nogob.
Sh Maxamed Axmed Baaruud ayaa intaas kudaray in howlo aad ubadan ay uqabsoomeen gudiyadii ukala amba baxay Gobolada aan magacooda kor kusoo xusnay.
Sh Maxamed Axmed Baaruud oo Warbaahinta ONA lahadlayay ayaa sheegay in howlgalka Culimada ee Ogadenia uu isugu jiray 2 qaybood oo kala ah wacyi galin balaadhan oo bulshada Soomaalida Ogadenia lasiinayay iyo dhismo gudiyadu ay laamihii Culimada ee Gobolada soo dhisayeen.
Sheekha ayaa ONA usheegay in howlgalka Gobolada Ogadenia ee ururka Culimada Soomaalida Ogadenia (UCSO) loobixiyay (Gudiga Dacwada & Hanuuninta Gobolada Ogadenia) wuxuuna sheekhu intaas raaciyay in howlgalka culimadu uu yahay mid midho dhalay.
Dhinaca kale sheekha ayaa sheegay in ay lakulmeen Golaha Culimada ee Masjidul Aclaha looyaqaano, kuwaas oo ay kawada hadleen sidii Culimada wadanka laysugu soodhawayn lahaa iyo sidii shacabka meel fiican loogu jahayn lahaa, wuxuuna sheegay in ay arimahaas isku afgarteen.
Sidoo kale Sh Maxamed Axmed Baaruud Gudoomiyaha Ururka Culimada Soomaalida Ogadenia UCSO qaybtiisa Ogadenia ayaa ONA usheegay in ay gudiyo udireen deegaano xurgufo qabiil ay kasocdeen sida Horo-shagax, Birqod, Bacaad, Shimbiray, Halooyo iyo deegaano kale oo xiisado dhinaca dhulka ah ay kasocdeen, wuxuuna sheekhu sheegay in uu ilaahay kuguuleeyay howlihii ay halkaas utageen.
Gabagabadii Sh Maxamed Axmed Baaruud ayaa sheegay in ay dadaal dheer ugu jiraan sidii ay dhamaan Gobolada Ogadenia uga furi lahaayeen xafiisyadii ururka culimadu uu kushaqayn lahaa, kuwaas oo sida uu sheekhu sheegay lagu xalin lahaa xurgufaha ugu badan ee maanta shacabkeena ka dhex jira oo ah Deegaan, Dumar iyo Diin.